'Dur yeroon hidhaa hiikamu namoonni dhufanii baga hiikamte naan jechuuf baayyee sodaatu turan' - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Uummanni Magaala Amboo fi naannawaa ishee kumoota dhibbaan lakkawaman hidhamtoota dhiyeenya hiikaman 39 sirna ho'aan simatan.
Simannaan kaleessaa magaala Gincii hanga lafa dhalootaa Dooktar Mararaa Guddinaa kan taate Tokkeetti fuulla'e haala ho'aafi nagaan xumurameera. Simannicha irratti daa'immanii hanga maanguddoo, jiraatoota magaalaatii hanga baadiyaa naannichaafi baratoota dhaabbilee barnoota olaanoo akkasumas keessummoonni magaala Finfinneerraa dhufaniin faayame oole.
Sagantaa isteediyeemii Ambootti taasifame fi namootni kuma dhibbaan lakka'aman irratti hirmaatan kana irrattis dura taa'aa koongirasii federaalawaa Oromoo Dooktar Mararaa Guddinaa dabalatee namootni torbee lama dura manneen hidhaa Federaalaatii bahan 39 akka hirmaatan qindeesitootni sagantichaa BBC'ti himaniiru.
Qindeesitoota sagantichaa keessaa tokko kan ta'an Obbo Baqqalaa Argasaa sagantaan simannaa kunis dargaggoota namoonni sababii yaada isaanii ibsaniif qofa hidhaman akka hiikaman wayita gaafachaa turanitti hidhamaa fi reebamaa turaniif gaaffiin isaanii gariin deebi'uu agarsiisuufi jedhaniiru.
Kana malees namootni hiikkaman kun ergaa fi miira isaanii uummataaf akka qoodan kaayyeefatee kan qophaa'eedha jedhan.
"Yeroon mana hidhaa turetti ADWUI'n dargaggoo Oromoo ijaaraa ture natti fakkaata" jechuun qindoomina simannaa dargagootni magaala Amboo fi naannawashee taasisisaniif kan dinqisiifatan Dr Mararaan, "qabsoon Oromoo laga guddaa bira gaheera" jechuunis haalli siyaasaa biyyattii jijjiirama keessa akka jiru dubbatan.
Gaaffiin siyaasaa uummataa sadarkaa olaanaarra gahuusaa galaanaan kan fakkeessan Dr Mararaan, ''galaanni garagaleera, garuu gara itti deemnu fi waan hojjennu beeknu malee rakkoo dha'' jedhaniiru. Gara fulduraattis deeggartoota isaanii waliin faayidaa uummataaf hojjechuuf waadaa seenaniiru.
Goodayyaa suuraa Ummata kumoota dhibbaan lakkaawamuti hidhamtoota hiikaman simachuuf Isteediyoomii Ambootti wal gahe.
Erga mootummaan biyyattii bulchaa jiru aangoo qabatee kaasee al kudhan hidhamuusaanii kan himanii fi hidhaa waggaa lamaa oliitiin booda torbee lama dura kan hiikaman barsiisan mana baruumsa qophaayina Amboo, Obbo Ashabbir Onchoo, simannaa uummanni taasiseefiin guddaa gammadu himanii, kabaja uummataaf qabanis olaanaa ta'u BBC'ti himan.
"Dur yeroon hidhaa hiikamu namootni dhufanii baga hiikamte naan jechuu baay'ee sodaatu turan, kan har'aa garuu adda kan ta'e fi uummatni dammaqee ka'uusaa kan natti agarsiiseedha" jechuun Obbo Ashabbir dubbatan.
Mootummaan waadaa seene eeguun hidhamtoota hafanilleen akka hiikuu fi seerri farra shororkeessummaa hidhamuu namoota baay'eef sababa ta'ees akka haqamu obbo Ashabbir gaafataniiru.
Goodayyaa suuraa Ummata kumoota dhibbaan lakkaawamut hidhamtoota hiikamn simachuuf Isteediyoomii Ambootti wal gahe.
Mukkeen waddeessaatiin kan marfame isteediyeemiin Amboo ibsa gammachuu uummataa dabalataan gaafiiwwan garaagaraatiin ho'iitee oltee.
Dargaggootni magaalaa Amboo fi naannawashee gaaffilee "hidhamtootni siyaasaa" akka hiikaman jedhu dabalatee, gaaffilee mirgaa hedduu gaafachaa aarsaa guddaa kafalaa turaniiru.
Jiraataa magaala Finfinnee kan ta'e dargaggoo Jaalal Caalaa, hawaasni fi mootummaan namoota hidhaarraa bahan kunneen ofitti fudhachuu fi gama maraan deeggaruu qabu jedheera. Akkasumas namoonni sababa siyaasaan hidhaman kan biraas haaluma kanaan gadhiifamuu akka qabu BBC'ti hime.
Maatiiwwan firoonni isaanii ammaallee mana hidhaatti jirani sagantaa simannaa kanarratti kan argaman yemmuu ta'u, hiikkamuu miseensoota maatii isaanii hawwiin akka eegan himan.
Haatii warraa Obbo Dajanee Xaafaa, barreessaa itti aanaa paartii koongirasii federaalawaa Oromoo kan ammaa hidhaarra jiranii, Aadde Assalafach Mulaatuu sagantaa kana irratti kan argaman yoo ta'u, miirri gammachuufi gaddaa itti dhagahamaa jiraachu dubbatan.
Kanneen carroomanii lubbuun hidhaarraa hiikaman arguuitti gammaduufi gama biraan ammoo namoota dhimma siyaasaatiin lubbuusaanii dhabaniif gaddi itti dhagahamuusaa kan himan Aadde Assalafach "hiikamuu hidhamtoota hafaniis uummata waliin eegaan jira" jedhan.
Torbee lama dura namoota manneen hidhaa federaalaarraa hiikamaniif magaalota Oromiyaa kan akka Shaashamannee, Naqamtee, Dambi Doolloo, Gidaamii fi kanneen biroo keessatti simannaa ho'aan taasifameera.